Ny Alimanakan’ny Tantaran’ny Olombelona, Nosoratan’ilay Mpanoratra Orogoaiana Eduardo Galeano · Global Voices teny Malagasy
Ny Alimanakan'ny Tantaran'ny Olombelona, Nosoratan'ilay Mpanoratra Orogoaiana Eduardo Galeano
Voadika ny 21 Avrily 2015 16:23 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, عربي, Italiano, English
Eduardo Galeano. Sary avy amin'ny mpisera Flickr, Mariela De Marchi Moyano. CC BY-SA 2.0
Navoaka voalohany tao amin'ny TomDispatch ity lahatsoratra ity ary navoakan'ny NACLA indray talohan'ny nahafatesan'i Eduardo Galeano tamin'ny Alatsinainy.
Iray amin'ireo mpanoratra miavaka indrindra ao Amerika Latina i Eduardo Galeano. Izy no mpanoratra ny Lalandrà Misokatr'i Amerika Latinina, Tsiaron'ny tantara telon'ny afo, Fitaratra ary ny sangan'asa maro hafa. Vao avy navoaka ho boky fanao am-paosy ny bokiny vaovao, Children of the Days: A Calendar of Human History (Zanaky ny Andro: Kalandarin'ny Tantaran'ny Zanak'Olombelona) ary ahitana sombiny eto ambany eto. Nandrombaka loka iraisam-pirenena maro izy, anisan'izany ny Loka Lannan voalohany ho an'ny Fahalalahan'ny Kolontsaina, ny Loka Boky Amerikana ary ny Loka Casa de las Américas.
Mark Fried no mpandika teny ireo boky fito nosoratan'i Eduardo Galeano, anisan'izany ny Zanaky ny Andro. Izy ihany koa no mpandika teny, amin'ny sangan’asa hafa, toy ny Angamenavava nosoratan'i Severo Sarduy. Monina ao Ottawa, Canada izy.
Tamin'ny 1919, maty nisy namono tao Berlin i Rosa Luxemburg, ilay revolisionera
Novelesin'ireo mpamono azy tamin'ny vody basy izy ary natsipin'izy ireo tany anaty lakandrano avy eo.
Teny an-dalana, tsy hita ny ila-kirarony.
Nisy naka tao anaty fotaka izany ila-kiraro izany.
Naniry tontolom-pahalalàna tsy hanaovana sorona ny rariny izy, na fahalalahana natao sorona noho ny rariny i Rosa.
Misy maka foana izany faneva (sora-baventy) izany isan'andro
Mianjera ao anaty fotaka, tahaka ilay ila-kiraro
Fankalazana Tsy Nahomby
Nitokona mba hanohitra ny karama variraiventy sy ny andro iasana tafahoatra ireo mpiasa ao amin'ny toeram-pambolen'i Patagonia ao Arzantina. Niditra an-tsehatra hampiverina ny filaminana ny polisy.
Mahatrotraka ny (hamaroan'ny) famonoana. Tamin'io alina io tamin'ny 1922, nandeha nankany amin'ny toeram-pivarotatena tao amin'ny seranan-tsambon'i San Juliàn hianoka ny valin'asany ireo miaramila reraka tamin'ny famonoana.
Saingy nanakatona ny varavarana tamin'izy ireo ny vehivavy dimy niasa tao ary nandroaka azy ireo sady nihiaka hoe “Mpamono olona! Mpamono olona, mivoaha ato! “
Noraisin'i Osvaldo Bayer ny anaran'izy ireo: Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache sy Maud Foster.
Mpivaro-tena tsara fanahy.
Tamin'ny taona 1901, natao tao amin'ny fiangonana Masindahy George ao an-tanàna Galisianina tao A Coruña ny fanambadian'i Elisa Sánchez sy Marcela Gracia.
Nifankatia niafina i Elisa sy Marcela. Mba hampanara-dalàna ny zava-drehetra, amin'ny lanonana, mpitondra fivavahana, fahazoan-dalana ary sary, tsy maintsy namorona lehilahy ho vady. Nanjary Mario i Elisa: notapahany ny volony, nanao fitafin-dehilahy izy ary nanova feo ho betroka.
Rehefa nivoaka ny marina, nitabataba nanaka-danitra ny gazety rehetra manerana an'i Espaina – “zava-doza maharikoriko izany, fitondra-tena manala-baraka” – ary nanararaotra ity tranga mampalahelo ity mba handaniana ny gazetin'izy ireo, raha nitory tany amin'ny polisy kosa ny fiangonana voafitaka tao anatin'ny fahatsorany.
Ary nanomboka ny hazalambo.
Nandositra nankany Portiogaly i Elisa sy Marcela
Tratra sy nampidirina am-ponja tao Oporto izy ireo.
Saingy afa-nandositra ry zareo. Nanova ny anarany ry zareo ary nandeha an-dranomasina.
Tsy hita ny nalehan-dry zareo rehefa tao an-tanànan'i Buenos Aires.
Zo hahery fo.
Tamin'ny taona 1816, nasondrotry ny governemanta tao Buenos Aires ho lietnà kolonely i Juana Azurduy “ho fankasitrahana ireo ezaka vitany toy ny lehilahy”.
Nitarika ny ady anaty akata nakàna an'i Cerro Potosí tamin'ireo Espaniola nandritra ny ady hoan'ny Fahaleovantena izy.
Raharahan-dehilahy ny ady ary tsy navela handray anjara tamin'izany ny vehivavy, saingy tsy tanan'ireo manamboninahitra lehilahy ny tsy hanome voninahitra ny herim-pon'ity vehivavy ity”.
Taorian'ny fitaingenan-tsoavaly kilaometatra maro dia maro, rehefa lavon'ny ady ny vadiny sy ny zanany dimy tamin'ireo enina, namoy ny ainy ihany koa i Juana avy eo. Namoy ny ainy tanaty fahantrana izy, mahantra noho ireo mahantra, ary nalevina tamin'ny fasana iombonana.
Efa ho taonjato roa tatỳ aoriana, nasondrotry ny governemanta Arzantina (izay tarihin'ny vehivavy ankehitriny) ho jeneraly izy “ho fanomezam-boninahitra amin'ny maha-vehivavy mahery fo azy”.
Vehivavy Nanafaka An'i Meksika
Tapitra ny fetin'ny fahazato taona ary nofafana ireo halotoana nameno tanàna.
Nanomboka teo ny revolisiona.
Mahatsiaro ireo mpitarika revolisionera tahaka an'i Zapata, Vila sy lehilahy hafa ny tantara. Adino kosa ireo vehivavy niaina am-pahanginana.
Tsy nanaiky ho voakosoka kosa ireo vehivavy mpiady vitsivitsy:
Juana Ramona, “Ilay Liona Vavy,” izay nahazo tanàna maro tamin'ny fanafihana;
Carmen Vélez, “Jeneraly”, izay nibaiko lehilahy 300;
Ángela Jiménez, tompon'ny baomba, niantso ny tenany hoe Angel Jiménez;
Encarnación Mares, izay nanapaka ny randrany ary nanjary lietnà lefitra miafina ambadiky ny satroka be sofina (sombrero), “amin'izay tsy hitan'izy ireo ny masony vehivavy”;
Amelia Robles, izay nanjary Amelio ary nahazo ny grady kolonely;
Petra Ruiz, izay lasa Pedro ary nahavita tifitra betsaka noho ny hafa hanokafana an-katerena ny vavahadin'i Mexico City;
Rosa Bobadilla, vehivavy tsy nety hivadika ho lehilahy ary nandray anjara tamin'ny ady maherin'ny an-jatony tamin'ny anarany manokana;
María Quinteras, izay nanao fanekena tamin'ny devoly ary nandresy tamin'ny ady rehetra. Nankatò ireo baikony ny lehilahy. Anisan'izany ny vadiny.
Ny Renin'ireo Vehivavy Mpanao Gazety
Ny marainan'io 1899 io; niainga i Nellie Bly.
Tsy nino i Jules Verne fa mahavita mitsidika irery izao tontolo izao ao anatin'ny 80 andro latsaka ity vehivavy kely mahafatifaty ity.
Saingy nahavita nitsidika izao tontolo izao tao anatin'ny 72 andro i Nellie, namoaka lahatsoratra hatrany mitantara izay reny sy hitany nandritra ny diany izy.
Tsy asan-kerimpo voalohany an'ity tanora mpanoratra gazety ity izany, ary tsy farany ihany koa.
Raha manoratra momba an'i Meksika, nanao Meksikana tenany izy ka nandefa an-tsesitany azy ny governementa Meksikana raiki-tahotra.
Raha manoratra momba ireo orinasa, niasa tamin'ny fanambatambarana izy.
Raha manoratra momba ny fonja, voasambotra ho nanao fandrobana izy.
Raha manoratra momba ireo trano fandraisana marary ara-tsaina, mody nanao adala izy ka nampidirin'ireo dokotera tany amin'ny toeram-pitsaboana adala. Nanameloka ireo fitsaboana ara-tsaina natao taminy izy, fa ny natao azy dia ampy hahalasa adala ny olona.
Tao Pittsburgh, rehefa feno roapolo taona i Nellie, asan-dehilahy ny asa fanaovan-gazety.
Tamin'izany no nanaovany fahasahisahiana tafahoatra namoahany ny lahatsoratra voalohany.
Telo taona taty aoriana, namoaka ny lahatsoratra farany izy, nidify ireo bala voalohan'ny Ady Lehibe Voalohany.
Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra Mihatra Amin'ny Vehivavy
Tao amin'ny alan'i Paranà Ambony, mivelona indray amin'ny fampisehoana ny tenany ireo lolo mahafatifaty indrindra. Mampiseho ny elany mainty misy pentina mena na mavo izy ireo, ary manidina mitety voninkazo tsy amin'ahiahy na dia kely aza. Taorian'ny taona an'arivony maro, nahafantatra ireo fahavalony fa misy poizina ireo lolo ireo. Miala lavidavitra azy ireo ny hala, takolapanenitra, androngo, lalitra ary ny ramanavy.
Tamin'izany andro izany, tamin'ny taona 1960, nodarohana ary natsipy tany anaty tevana ireo mpikatroka telo manohitra ilay mpanao didy jadona Trujillo tao amin'ny Repoblika Dominikanina. Mirabal mirahavavy avy. Mahafatifaty indrindra ary nantsoina hoe Las Mariposas, “Ry lolo (manidina).”
Ho fahatsiarovana azy ireo, ho fahatsiarovana ny hatsara-tarehin'izy ireo, Andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy androany. Na koa fanafoanana ny herisetra ataon'ireo Trujillos kely izay manjakazaka amin'ny tokantrano maro.
Azon'i Rita Levi-Montalcini ny Loka Nobel ny fitsaboana tamin'ny taona 1986.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny korontana, teo ambanin'ny didy jadon'i Mussolini, nianatra niafina momba ny ‘fibre nerveuse” tamin'ny laboratoara nafenina tao an-tranony i Rita.
Taona maro taty aoriana, taorian'ny asa goavana, nahita ny proteinina izay mampitombo ny selan'olombelona ity mpitsikilo ny misterin'ny fiainana ity, izay nahazoany ny Loka Nobel.
Tokony ho valopolo taona teo izy raha nilaza hoe: “Mikentrona ny vatako, fa tsy ny atidohako. Rehefa tsy afaka mieritreritra intsony aho, ny hany faniriako dia fanampiana ahy ho faty amim-pahamendrehana. “
2 andro izayNikaragoa
22 ora izayAzia Atsimo